Naphezu kweqiniso lokuthi Februwari - kuba inyanga emfushane kunazo zonke ngonyaka, kusolakala njengoba eside futhi oyisicefe. Winter, okuyinto ngo-December ujabule ngakho enesithwathwa esimhlophe esinoboya ngensizakalo, kwadingeka kakade podnadoest. Imizimba yethu banesithukuthezi ku amavithamini kanye inhliziyo - kokushisa kwelanga, ukucula izinyoni, ngamanye amazwi, entwasahlobo. Ngakho-ke, ekupheleni ebusika thina amboze ngokuphahluka Ipotimende kwemizwelo - ufuna ukuyeka kude imizi grey, lapho kukhona rawness futhi umkhuhlane, ilanga, ulwandle kanye ebhishi. Kodwa lapho bangabeki ngoFebhuwari ukuthi Yayishibhile, futhi kahle, lapho amandla mali futhi amandla, bese ulinda okuhlukumezayo sakithi entwasahlobo eside elindelwe?
Ngenhlanhla, kukhona amazwe lapho wokugcina ngenyanga nobusika ikhalenda lihlotshaniswa ukuphakama entwasahlobo. ETurkey, ogwini Mediterranean isivele umnyuziki ilanga siya sifudumala futhi blooms alimondi. Sea namanje coldish, futhi kungaba ezinomoya ogwini. Kodwa zaseBalearic Islands (Mallorca, isibonelo), kanye oluseningizimu ye eSpain, uhlu izindawo lapho ungakwazi aphumule kahle kakhulu ngo-February. I-Portugal and abantu abalisebenzisayo eziQhingini zaseCanary ziyojabula izivakashi ngempela ilanga ehlobo futhi ngempela ukhululekile ngoba bethamele ilanga namazinga okushisa ebhukuda. Vele abafike ekuseni entwasahlobo aluhlaza futhi zizinde phezu iziqhingi Greek of Rhodes eKrethe.
Uma abantu becabanga ukuthi mayelana nokuthi ukuphumula ngo-February, into yokuqala beze engqondweni lolwandle endaweni. EGibhithe, ne kokuphela amaholide kanye ehambisana amanani hype iwe kakhulu. Nokho Hurghada basengaba ezinomoya kakhulu futhi lokushisa oLwandle Olubomvu aliphumi ngenhla ezingeni + 20-22 ° C. I-UAE futhi ukuwohloka kwamanani, kodwa kukhona imimoya enamandla futhi ngokungafani ngempela obonakalayo phakathi emini okushisa ebusuku. Kolunye uhambo lwamuva okunjalo udinga ukuthatha nge ijezi efudumele noma ibhantshi ukukhanya. Kodwa kuleli yokungcebeleka ka Sharm el-Sheikh eGibhithe, futhi emirate of Sharjah e-United Arab Emirates siyaqhubeka igcwale ehlobo, ngenxa yokuthi lezi zindawo zivaliwe emimoyeni ebandayo. Ngakho, Khor Fakkan e Emirate Sharjah resort iseningizimu elaliphansi kwamagquma Al-Hajar kwi-Indian Ocean. Bobabili zokungcebeleka izimo esihle kakhulu diving kanye okuphumuzayo beach holiday.
Thailand inikeza ezindaweni eziningi ezithakazelisayo ekuphumuleni ngo-February. Kuleyo ngosi uyothola ugxumele wangempela inganekwane. Ikakhulukazi ngoba inyanga yokugcina ebusika ngokuvumelana ikhalenda Chinese, ngokuvamile ayegubha kokufika koNyaka Omusha WamaShayina. izimo zezulu Wonderful nesokuphumula serene, uzothola esifundazweni Krabi, kuleli yokungcebeleka of Pattaya, ngesikhathi Koh Chang Island, Phi Phi Island, Phuket, Koh Lanta, Koh Samet futhi Yaoyay. Usuku lokushisa akusho uphonsa ngezansi 26 Celsius futhi ulwandle ezolile olumnandi, amanzi ecacile (okuyinto ebaluleke for abatshuzi) kanye lokushisa + 26-28 ° C. Emhlabeni izimo ezifanayo sezulu ungakwazi ukubamba nakwamanye amazwe angavamile. Sekuyisikhathi eside Inkathi yezimvula lidlule futhi ngeke ngokushesha noma kunjalo, Licwathile esibhakabhakeni, kolwandle kungekho amagagasi noma imisinga enamandla.
Kodwa uma ungakwazi ukukhokhela emazweni akude lemvula, lapho kungenzeka ukuya eholidini eduze nasekhaya? Februwari - ngenyanga wemikhosi. Ngaphambi yokuHlawula, yonke iYurophu uthi goodbye ngokushesha ngokujabula. azenza Colorful senzeka e-Venice, lapho wonke umuzi phezu kwamanzi uguqulwa futhi iba esiteji ngokucebile ezigcawugcawu. Azenza esiqhutshwa nakwamanye amadolobha isiNtaliyane, Verona, kanye le-Cote d'Azuri eFrance, e Nice neMelitha. Adume Rio Carnival njalo ngoFebruary iqoqa izixuku ezingenakubalwa yizivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba.
Futhi ekugcineni, ngo-February - ke kuba yisikhathi ukuhlela kokuba ebusika okukhulu. I ski resort kakade ehlasela iqhwa ngokwanele ukugibela phezu adumileyo Ukushushuluza noma Awe-Tobogganing emithambekeni ekhatsi Andorra, Switzerland, Austria, e-Italy, eJalimane, eFrance ngisho Turkey ne-Spain. zokungcebeleka Russian futhi anikele ukusizakala ithuba lokugcina ukugibela: Khibiny, Elbrus, Cheget, Dombay, Krasnaya Polyana ngo-February kubhekwa ngenyanga seqhwa kakhulu. Ngo Ukraine Carpathians, ungavakashela ski resort of Bukovel. Lona omunye ambalwa unqambothi European-isitayela zokungcebeleka ezweni lapho ezishibhile bangabeki ngempela ngempela. Downhill skiing kungenziwa kuhlangene izinqubo spa.
Lapho ukuya eholidini kuleli hlobo? Makalale Berdyansk oLwandle Azov
Pelargonium olunephunga elimnandi: ukunakekelwa ekhaya